🥇 Ukwenza ingxelo yobugqirha kumazinyo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 729
Umboniso we-accounting kwi-dentistry
Yenza i-accounting kwi-dentistry
Iiklinikhi zamazinyo bezisoloko ithandwa kakhulu. Ukuba ngaphambili iinkonzo zoogqirha bamazinyo zazibonelelwa kwiipolylinikhi, ngoku kukho imeko yokuvela kwamaziko onyango amaninzi, kubandakanya nonyango lwamazinyo. Inika uluhlu olubanzi lweenkonzo ukusuka ekuchongeni ukuxilonga ukuya kwizitho zokufakelwa. Accounting kwi amazinyo ineempawu zayo, njengohlobo lomsebenzi wokunyanga abantu ngokwabo. Apha, indima ebalulekileyo idlalwe ngogcino zincwadi zokugcina izinto, ubalo lwamayeza, ukubalwa kwabasebenzi, ukubalwa kwexabiso leenkonzo, imivuzo yabasebenzi, ukuvelisa iintlobo ngeentlobo zeengxelo zangaphakathi kunye nezinye iinkqubo. Imibutho emininzi yamazinyo ijongene nemfuneko yokwazisa ngoomatshini kwinkqubo yokubalwa kwemali. Ngokwesiqhelo, imisebenzi yomgcini zincwadi ibandakanya ukubekwa kweliso ngokupheleleyo kwimeko, ukubanakho ukulawula ixesha lomsebenzi wabo kungekuphela, kodwa nabanye abasebenzi. Ukuze umcwangcisi-mali wamazinyo enze imisebenzi yakhe ngokufanelekileyo kangangoko kunokwenzeka, inkqubo yokuzenzekelayo yenkqubo yokubaluleka ibalulekile. Namhlanje, imakethi yetekhnoloji yolwazi inikezela ngesoftware eyahlukeneyo yokwenza ugcino lwamazinyo olwenza umsebenzi womgcini zincwadi wamazinyo ube lula ngakumbi. Eyona nkqubo ibalaseleyo yobalo lwamazinyo inokuqwalaselwa ngokufanelekileyo njenge-USU-Soft application. Inezinto ezininzi eziluncedo ezisincedileyo ukuba siphumelele kukhuphiswano kwintengiso kumazwe amaninzi. Inkqubo yobalo lwamazinyo yahlukile ngokulula kokusebenzisa, ukuthembeka kunye nokubonakaliswa kolwazi. Ukongeza, inkxaso yezobuchwephesha yesicelo se-USU-Soft siqhutywa kwinqanaba eliphezulu lobuchwephesha. Iindleko zesoftware yobuchwephesha bamazinyo ziya kukonwabisa. Makhe sijonge ezinye zeempawu ze-USU-Soft esetyenziswa njengenkqubo yobalo kunyango lwamazinyo.
Zama isoftware yethu entsha. Enye yezona zicelo zinenzuzo kunye nezobugcisa eziphambili kwimarike. Gcina ixesha kwaye ukhulise ishishini lakho ngokulula, isoftware ebonakalayo ebonakalayo yolawulo lwamazinyo. Fumanisa amanqaku anamandla adityanisiwe kuhambo olulula lomsebenzi kunye nembonakalo yomsebenzisi enomdla. Yenza okungakumbi ngokucofa okumbalwa kunye nemali encinci. Isicelo se-USU-Soft silungele oogqirha, njengoko begcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-70 zexesha labo ngokugcwalisa iirekhodi zonyango, idayari kunye namatyala kwimizuzu nje embalwa kunye nesoftware yolawulo lwamazinyo. Ishedyuli yokuqeshwa ihlala isondele, kwaye izikhumbuzo mazenze ugqirha kunye nezigulana ukuba zilibale malunga nexesha elimiselweyo. Ukubalwa ngokuzenzekelayo kwesicwangciso sonyango kunciphisa ixesha lokuqeshwa kwesigulana. Ukunika ingxelo ngokuphandle ngomsebenzi ogqityiweyo kuqinisekiswa ngenkqubo yobalo lwamazinyo, kunye nokubala okukhawulezayo kweebhonasi ezinxulumene nomsebenzi wabasebenzi. Umdibaniso noluhlu olubanzi lwezixhobo ikunika izixhobo ezingakumbi zokwenza ukuba amazinyo akho asebenze ngakumbi. Inkqubo yobalo lwamazinyo ixhasa irejista yekheshi ekwi-intanethi kunye neenkqubo ze-x-ray.
Imisebenzi yesiqhelo kunye nezenzo zesiqhelo ziyafezekiswa sisicelo. Bala ukuba lingakanani ixesha oogqirha kunye nabamkelekileyo abachitha begcwalisa iirekhodi zesigulana, amatyala, iingxelo, izivumelwano, izibonelelo zorhwebo kunye namanye amaxwebhu? Zingaphi iiyure ezichithwayo kufundiswa umntu omtsha obu bulumko? Ukuzenzekelayo kweenkqubo eziqhelekileyo kunye neziqhelekileyo kunika abasebenzi ixesha elixabisekileyo lomsebenzi osisiseko. Izibalo ezinzima zenziwa ngemizuzwana. Impazamo yomqeshwa omnye kubalo oluntsonkothileyo okanye ukugcwalisa iingxelo ezingekho mgangathweni kunokubangela inkampani ingafumani mali ininzi yengeniso yayo. Umlawuli akenzi mpazamo ngolunya; Yimpazamo yomntu eqhelekileyo. Isoftware ayingomntu, ayenzi iimpazamo. Sebenzisa eli thuba kwaye ulahle iimpazamo ngonaphakade. Ukucwangcisa ixesha lomqeshwa kukwaluncedo olukhulu kwinkqubo yobalo lwamazinyo. Kubalulekile ukucwangcisa ishedyuli yomqeshwa ngamnye. Umzekelo, yakha ikhonkco elinje lokuqeshwa kwesigulana ukuze ugqirha enze umsebenzi ngaphandle kokungxama kwisithuba ngasinye. Ngokwenza njalo, ikhonkco alinakuba nayo imingxunya kwishedyuli kwaye kungabikho kuchitha iiyure zomsebenzi.
Yintoni inkqubo yokujonga imeko kwezonyango? Inkqubo yobalo ebumbeneyo yenzelwe ukukhusela abathengi kumayeza angekho semthethweni kunye nokubonelela abemi kunye nemibutho ngenkonzo yokujonga ngokukhawuleza ukuba semthethweni kwamayeza. Ukongeza, ukwaziswa kwenkqubo yobalo lwamazinyo kubonelela ngolwazi oluneenkcukacha ngokuhamba kwephakheji, kunye nolwazi olwenza ukuba kungasasazeki ngakumbi (umzekelo, ulwazi esele luthengisiwe okanye lurhoxisiwe ekusasazeni kolunye izizathu).
Kububulumko ukungathembeli kwiinkqubo zobalo-mali olwenziwa kwi-Intanethi ngaphandle kwentlawulo. Umphathi okrelekrele uyaqonda ukuba ishishini elilungileyo lifuna isicelo esisemgangathweni. Nangona kunjalo, akukho nelinye inqaku lomgangatho kwisicelo esimahla. Sikunika into ekhethekileyo kwaye iluncedo kumsebenzi wamazinyo akho. Sifumene amava kwaye sinokuqinisekisa ngowona mgangatho uphakamileyo wenkqubo yobalo lwamazinyo, kunye neqela lenkxaso yezobuchwephesha. Iingcali zethu zihlala zikonwabile ukukunceda kwiingxaki zakho, kunye nokunikezela ngokusebenza okutsha okuqhubekekayo kwiphakheji esele ifunyenwe yemisebenzi ye-USU-Soft application. Ekuphela kwento eyahlula iklinikhi yakho kunye nale nkqubo sisigqibo ekufuneka usenzile. Sikubonise into onokuyiphumeza ngenkqubo, okunye kuxhomekeke kuwe!